नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद : महासमाजवादको खतरा ! - Namaste Post
नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद : महासमाजवादको खतरा !
प्रदिप गिरी २०७६, ८ आश्विन बुधबार १२:४७ 0
चे ग्वेभाराले भन्नुभएको छ, ‘म भनेको पुँजिवाद र हामी भनेको समाजवाद हो।’
राम कार्कीले भनेको कुरा हो, यो। म त्यसमा सहमत छु। अहिले गरिएका कुनै पनि कार्यले मलाई बलियो बनाउँछ कि हामीलाई बलियो बनाउँछ? भन्ने मापदण्डमा नेपालमा आजको सन्दर्भमा समाजवादको उत्तर भेटिन्छ।
यहाँ ‘म’बाट ‘हामी’मा अवतरण हुँदै जाँदा सम्झिनुपर्ने एउटा कुरा छ। अपवादले जहिले पनि नियमलाई नै सिद्ध गर्छ भनिन्छ। आजसम्मको इतिहासमा अपवाद बाहेक सबै ठूला परिवर्तन युवाले नै गरेका छन्। वैज्ञानिकहरुले मानिस पैँतिस वा चालिस वर्ष नाघेपछि मौलिक चिन्तन गर्नै सक्दैन, आफूलाई दोहोर्‍याएर बस्छ। यो संसारका सबैभन्दा ठूलो मान्छे, यसै देशमा जन्मिएका गौतम बुद्धले जुन आत्मज्ञान प्राप्त गरे, सिद्धार्थबाट उनको नाम बुद्ध भयो। उनले उनन्तीस वर्षको उमेरमा घर छोडेर निस्केका थिए। त्यसको पाँच/छ वर्षमा उनलाई ज्ञान प्राप्त भएको थियो। उनले विश्वभर हिंसा गर्नुहुन्न भन्ने शिक्षा दिन सफल भए। उनै बुद्धको पदचिन्ह अनुकरण गर्दै पश्चिममा एकजना मानिस निस्कीए इसामसी नामले चिन्दछौँ। पछि उनलाई शुली चढाइयो। त्यतिवेला उनको उमेर बत्तिस वर्ष थियो।
त्यस्तै आधुनिक कालको १८४६ मा ‘थेसिस अफ फायरबाख’ लेख्दा कार्ल माक्र्सको उमेर अट्ठाईस वर्ष थियो। त्यस्तै १८४८ मा कम्युनिष्ट घोषणा पत्र लेख्दा माक्र्स तीस वर्ष र एंगेल्स २८ वर्षका थिए। लेनीनको जीवनको सबैभन्दा प्रभावशाली पुस्तक ‘ह्वाट इज टू बी डन ?’ लाई मानिन्छ। जहाँ उनले जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। त्यतिवेला उनी पैँतिस वर्षका थिए। ‘ह्वेर टू बीगीन ?’ लेख्दा त उनी एकतीस वर्षका थिए। रोजा लक्जम्बर्ग लेनीनभन्दा एक वर्ष कान्छि थिइन्। माक्र्सवादका कट्टर विरोधिले पनि लेनीनको समयलाई माक्र्सवादको स्वर्णीम युग थियो भनेर लेखेका छन्। माक्र्सवादका क्षेत्रमा नयाँनयाँ सिद्धान्त लेख्ने मान्छेहरु जस्तै स्टालीनको पालामा बर्बर हत्या भएका बुखारीनले ३६ वर्षको उमेरमा साम्राज्यवादका बारेमा लेनीन र रोजा लक्जम्बर्गसँग राय बझाएर किताब लेखेका थिए। टटस्की नै पनि भनौँ। सबै पैँतिसको हाराहारीका थिए। विपी कोइरालाले ००७ सालको क्रान्तिको गर्दा ३२ वर्षको हुनुहुन्थ्यो। पुष्पलाल उहाँभन्दा पनि कान्छो हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकन वार अफ इन्डीपेन्डेन्टसका एक एक नेतालाई सम्झिनुस्, वासिङ्टन बाहेक। किसुनजी ००७ सालको क्रान्तिपछि सल्लाहकार सभाको सभामुखमा नियुत्त हुँदा यिनको उमेर नै पुगेको छैन भनेर मुद्दा चल्यो। यो कुनै कविताको कुरा होइन, इतिहासको कठोर वास्तविकता हो। जे गर्नुपर्ने छ, त्यो युवाले गर्ने हो।
रोजा लक्जम्बर्ग कार्ल माक्र्सपछिको सबैभन्दा शासहिस मानिस हुनुहुन्थ्यो। उहाँको हत्या भयो। जर्मनिको सेनाको संरक्षणमा पालिएका गुण्डाले मनपरी गर्ने एउटा प्रतिक्रियावादी संगठन बनाएका थिए। त्यसैले रोजाको हत्या ग¥यो। त्यतिवेला उहाँको उमेर अठचालिस वर्ष पुगिसकेको थियो। उहाँले त्यतिवेलासम्म धेरै महत्वपूर्ण कृतिहरु लेखिसक्नु भएको थियो। बल्ल विश्वको ध्यान त्यतातिर जाँदैछ। उनको एउटा लेखमा भनिएको थियो ‘आगमी भविष्यमा कि बर्बरता हुनेछ कि समाजवाद हुनेछ।’
घनश्याम भुषालले परिस्थिति बिग्रेको चिन्ता गर्दै भनेका छन्, ‘संविधानमा त समाजवाद लेखिएको छ। तर हाम्रा शासक, नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले या सबैले भनौँ गरेका क्रियाकिलापले हामी डेगैपिच्छे समाजवादको विपरित दिशामा जाँदैछौँ।’ त्यति मात्रै होइन ‘समाजवाद फापेन’ नै भन्लान भन्नेजस्तो कुरा पनि उहाँले गर्नुभयो। म घनश्याम भुषाललाई भन्न चाहन्छु समाजवाद नफापे त वेशै हुन्थ्यो, खासै फरक पर्ने थिएन। समाजवाद लेखिसकेपछि संविधानमा रहन्छ नै। म अर्को खतरा देख्दैछु, ‘अन्य देशले समाजवाद ल्याएपछि संविधान संसोधन गरेर ‘हामी त महासमाजवाद ल्याउँछौ’ भन्न बेर छैन।
लेनीनले रुसमा क्रान्ति गर्दा सारा दुनियाँ उनका उपर जाइलाग्यो, आक्रमण ग¥यो। ‘कृषिप्रधान देशमा समाजवाद हुन्छ ?, के खोजेको ?’ भनेर ठूलठूला समाजवादीले आलोचना गरे। लेनीनले भने, ‘हामी एक्लै गर्ने हो र ? समाजवाद अन्तर्राष्ट्रिय बन्दैछ। जर्मनीमा हेर। जर्मनिको समाजवादी क्रान्ति सिद्धिएपछि त्यहाँको प्रविधि, त्यहाँको ज्ञान, त्यहाँको नयाँ उत्पादन प्रणालीमाथि हाम्रो जशक्तिले गएर काम गर्छ।’ आदि इत्यादी। तर जर्मनीमा भएन। जर्ममीमा क्रान्तिको असफल प्रयास भयो। रोजा लक्जम्र्बग सहिद भईन्। त्यसपछि जर्मनीमा समाजवादका नाउँमा दुईवटा पार्टी खुले, एउटा ‘सोसल डेमोक्रेटीक पार्टी’, अर्को ‘कम्युनिष्ट पार्टी’। एउटै पार्टी फुटेर दुईवटा भए। त्यतिवेला अहिलेको नेपालको नेकपाको दुई तिहाई, उपेन्द्र–बाबुरामको समाजवाद, कांग्रेसको समाजवाद, अरुको पनि गरेर हेर्दा त नब्बे प्रतिशत समाजवादी भएजस्तै अवस्था जर्मनीमा थियो। त्यस्तो अवस्थामा एकजना व्यक्ति हिटलर भन्ने निस्कीए। देशमा निराशा थियो, बेरोजगारी थियो, भ्रष्टाचार थियो। हिटलरले भने, ‘यीनीहरु त नक्कली समाजवादी हुन्, असली समाजवादी म हो। यीनीहरुको राष्ट्र विरोधि समाजवाद हो, मरो समाजवाद हो राष्ट्रवादी।’ उनले आफ्नो पार्टीको नाम ‘नेस्नल सोसलिस्ट पार्टी’ राखे। त्यसैले मै भने चिन्ता गर्नुपर्दैन, समाजवाद छुट्दैन तर राष्ट्रवादी समाजवाद यहाँ आउँछ। जुन बाटोमा जर्मनी गयो त्यो समाजवादी नभएर होइन धेरै समाजवादी भएर हो। आत्मघाति समाजवादी भएर हो। मुख्य शत्रु नचिनिकन एकअर्कासँग हानथाप गरेका थिए, काटाकाट गरेका थिए। त्यसपछि हिटलरको उदय भयो। यो इतिहासको सत्य हो। त्यो जर्मनीमा भएको कहाँ यहाँ त्यही सोचेको भनेर हुँदैन। यो विदेशी समाजवाद भयो भनेर राष्ट्रिय समाजवाद ल्याउन पनि बेर छैन। त्यसपछि कसैको केही लाग्छ ? राष्ट्रवादी पनि सन्तुष्ट, समाजवादी पनि सन्तुष्ट। म त्यस्तै खतराको परिदृश्य नेपालमा पनि देखिरहेको छु।
त्यति वेलासम्म तपाईजस्ता कोही पनि वास्तविक समाजवादीहरु जेल पर्नु भएन र मारिनु भएन भने देखिहाल्नु हुन्छ।
लेनीन त साधारण जीवनशैली अपनाउने मानिस थिए। त्यो उनका जीवनीकारले लेखेका छन् उनले आम नागरिकभन्दा अलिकति पनि बढी राशनको सुविधा उनले लिँदै लिएनन्। अनि चाउचोस्की चाहीँ को थियो भन्यो भने के भन्ने। सबै त कम्युनिष्ट हुन्। नराम्रा कुराहरु छानेर ‘चाउचोस्कीको जस्तो विलाशीता, उत्तर कोरियाको जस्तो शासन, पोलपोर्टको जस्तो जातिय उन्माद गरेर यो राष्ट्रिय समाजवाद हो बुझिस्’ भनेपटि कसको के लाग्छ ? त्यसैले जर्मनीको समाजवादी आन्दोलनबाट नेपालले शिक्षा लिनु परेको छ। वास्तवमै ठूलो शिक्षा लिनु परेको छ। जर्मनको मात्रै होइन, शोभियत युनियनको पतनपछि खण्डीकरण भएको इतिहासको शिलशिला पनि अध्ययन गर्नुपर्छ।
समाजवाद भनेको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण हो। समाजवादको अर्को नाम ऐतिहासिक भौतिकवाद हो। समाजवादका नाममा एकसय बीस वर्षसम्म के–के भयो ? त्यसको अध्ययन र निश्कर्ष म दुई वाक्यमा भन्न चाहन्छु, ‘समाजवादका नाममा प्रयोग हुने कुनै पनि व्यवस्थाले नागरिक अधिकारका उपर हमला गर्न पाउँदैन। हुँदैन। गर्‍यो भने गलत दिशामा जान्छ।’
लेनीनले रुसमा क्रान्ति गरेपछि रोजाको केही ठाउँमा विमत्ति थियो। तर, उनले अरुलाई ‘आखिर क्रान्ति त ग¥यो नि !’ भनेर बचाउ गरेकी थिइन्। संविधान सभा विघटन र नागरिक अधिकार अपहरणलगायत जमिनका विषयमा पनि उनको लेनीनसँग फरक मत थियो। नागरिकको अधिकारको प्रत्याभुति प्रत्येक समाजवादी समाजमा हुनुपर्छ। यति भनेर मात्रै समाजवाद निर्माणका प्रश्नहरु हल हुँदैनन्, मलाई थाहा छ। समाजवादको निर्माणको समस्या योभन्दा जटिल छ। यसको उत्तर कसैले दिनसक्दैन, तत्कालिन परिस्थितिले मात्रै दिनसक्छ। माक्र्सलाई यसरी सञ्चार क्रान्ति होला, प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुरबाट भिडियो कन्फ्रेन्स गर्नुहोला भन्ने थाहा थियो त ? थिएन। माक्र्सले भिडियो कन्फ्रेन्स गर्नुहुन्छ या हुँदैन भनेर माक्र्सले लेख्नु नै भएको छैन भन्न थालियो भने त्यो यता पनि हुँदैन उता पनि हुँदैन। यस्ता धेरै विषयहरु थिए, जो माक्र्सलाई पनि थाहा थिएनन्। माक्र्स त के विपी कोइरालालाई पनि थाहा थिएन। पुष्पलाललाई, लेनीनलाई थाहा थिएन। त्यतिमात्रै होइन, स्वर्गिय मदन भण्डारीलाई थाहा थिएन। यसको जवाफ नेपालका सबैभन्दा अग्ला मान्छे गौतम बुद्धले मर्नेबेलामा भनेर गएका थिए। शिष्यले गुरु तपाइँ त मर्न आट्नु भयो, हामी कसलाई हेर्ने ? भनेपछि उनको अन्तिम जवाफ थियो, ‘‘आत्म दिपो भवः’, आफैले आफूभित्र तिमिले जानकारी खोज्नु।’ उनले अर्को पनि भनेका थिए, ‘सबै दुःखका कारण छन्।’ यहाँ धेरैलाई लागेको छ ‘म प्रधानमन्त्री नभएर हो, भएको भए देखाइदिन्थे।’ त्यस्तो आत्मगत कारणले समाजवाद नआएको होइन, यसको वस्तुगत कारण छ। हाम्रो उत्पादनको सम्बन्ध, प्रणाली, सांस्कृतिक, बौद्धिक र भावनात्मक अवस्थाले हो।
समाजवाद इतिहासमा एउटा बौद्धिक, तर्कपूर्ण बहसका रुपमा थालनी भएको थियो। पुँजिवादले व्यक्ति मात्रै धनि बनायो, धनि झन धनि र गरिब झन गरिब हुँदै जाने स्थिति बन्दै गयो समाज झन बिग्रीदै गयो भनरे अठारौँ शताब्दीको बीचभन्दा अलि पहिलेदेखि नै यसको बहस सुरु भयो। बुद्धले भने पनि ‘दुःखको कारण छ र कारणको निवारण छ।’ कार्ल माक्र्स युवा अवस्था हुँदा उनको छिमेकमा एकजना ठूला बिद्धुवान बस्थे। तिनको पुस्तकालयमा चाहिने जति पुस्तकहरु पाइन्थे। माक्र्सको विचारधारामा सबैभन्दा बढी प्रभाव हेगेलको दर्शन र स्यामुअल साइमनको राजनीतिक विश्लेषण, वर्गीय विश्लेषणको महत्व छ। माक्र्सको उदय भएपछि समाजवादी चिन्तनको इतिहासमा सुर्यको उदय भएपछि सारा तारा र ग्रह देखा नपरेजस्तै भयो। अरुको चर्चा हुन छाड्यो।
रुसी क्रान्ति भएको एकसय वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। इतिहास त्यहाँ रोकिएको छैन। के हामीले रुसी क्रान्तिपछि शोभियस संघ विघटनको, भूमण्डलीकरणका नाउँमा आएको त्रास र सन्त्रास अध्ययन गरेका छौँ ? अमेरिकामा एक प्रतिशत पुँजिपतिका हातमा त्यस देशको उनान्सय प्रतिशत सम्पत्ति केन्द्रीत भइसकेको छ। प्रत्येक वर्ष त्यो केन्द्रीकरण झनझन तिब्र भएको छ। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय पुँजिवादी डाटा हेरेपनि हुन्छ। देश र देशका बीचमा पनि गरिबीको खाडल विपन्नताको खाडल, ठूला र बडाको खाडल झनझन फराकिलो हुँदै गएको छ। एकातिर गरिबी, भोकमरी, सन्त्रास डेंग्यु थुप्रि राखेको राखेको छ, अर्कोतिर सम्पन्नता, विलाशिता, भोक, असन्तोष, तनाव र अलिकति आत्महत्या पनि बढिरहेको छ। जीवनबाट माया–प्रेम, सद्धभाव समाप्त भएको छ। दुवै व्याकुल छन्।
यहाँ केही कमरेड घनश्याम भुषालहरु व्याकुल छन् क्रान्ति कसरी होला भनेर। त्यसैले आज समाजवादको कार्यक्रम बनाउँदा इतिहासको बोझ नबोक्ने भन्ने राम कार्कीको तात्पर्यलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। विगत एकसय वर्षको समाजवादी प्रयोगको शिक्षा के हो ? रुसको शिक्षा के हो ? चीनको शिक्षा के हो ? बेलायतमा पनि समाजवादको पक्ष लिने पार्टी बाँकी छ, जर्मनीमा पनि समाजवाद थियो, भारतमा इन्दिरागान्धिले समाजवाद भनेर धेरै हल्ला गरिन्। यसमा हामीले माक्र्सले भनेजस्तै ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्नुपर्छ। जुनसूकै पार्टीमा रहेको भएपनि, आन्दोलनबाट आएको भएपनि कतिपय निश्चित सवालमा, महिलाको सवालमा, स्वतन्त्रताका सवालमा, दलित अधिकारका सवालमा, पर्यावरणको रक्षाको सवालमा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका सवालमा, आत्मनिर्भरका सवालमा हामीले आवाज उठाउनु पर्छ। आवाज उठाउन प्रेरित गर्नुपर्छ। यी अहिलेका एक्काइसौँ शताब्दीका समाजवादका एजेन्डाहरु हुन्। नेपालमा कुनै समय थियो, जहाँ कम्युनिष्टहरुले भन्ने गर्थे, गाउँगाउँबाट उठ, बस्तीबस्तीबाट उठ सायद त्यो मञ्जुलको रचना थियो। अब अहिले पार्टीपार्टीबाट उठ, गुटगुटबाट उठ, ग्याङ्गग्याङ्गबाट उठ। अबको यात्रा केवल समाजवाद हुनुपर्छ।
हाम्रा आवाज र उठाईमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास कुनै सरकारले गर्ला त्यही दिन यहाँ आन्दालेनको सुरुवात हुन्छ, क्रान्तिको सुरुवात हुन्छ। तर, त्यसका लागि तपाई यति तेज बोल्नुस् कि, यति तेज बोल्नुस कि सरकार प्रतिबन्ध लगाउन लाचार होस्।
रुसी क्रान्ति जहाँ बोल्सेभिक पार्टीको क्याम्प थियो, सायद स्कुलमा थियो त्यहाँ ताला लगाउ भनेर भने। टटस्कीले भने ‘ताला तोड।’ त्यसपछि बोल्सेभिक क्रान्ति सुरु भयो। हाम्रो जिन्दगीमा हामी ताला तोड्ने दिन आवस भन्ने चाहन्छौँ। सरकार जसकोसूकै होस्, चाहे शेरबहादुरको होस् वा बाघबहादुरको होस्, ओलीको होस्, प्रचण्डको होस्। समाजवादका एजेन्डामा सबैभन्दा पहिले, महिला, दलित, जनजाती, मधेसी हुँदै नागरिक अधिकारको रक्षा गर्दै हाम्रो हितमा स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति, गासबास र कपासको समस्या हल गर्ने विषय हुनुपर्छ।
कम्युनिष्टहरु पनि विचार बाहेक कमभन्दा कम आक्षेप कंग्रेसलाई लगाउनुहोस्, म पनि कमभन्दा कम आक्षेप तपाईँका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई लगाउँछु। आक्षेप लगाउँदै जाउँ, किनभने त्यसो ग¥यो भने त्यहाँ दुवै पक्षका मानिसहरु हुन्छन्, एकअर्काको कुरा सुनिन्छ। टिपेर राख्नुहोला नेपालले अर्को एउटा संयुक्त जनआन्दोलनको प्रतिक्षा गर्दैछ। यसपटकको आन्दोलन खेर जादैन। साच्चै नै समाजवाद आउँछ र त्यो नेपालका लागि मात्रै हुनेछैन। कुनैदिन गौतमबुद्ध विश्वभर आलोक फैलाएजस्तै हुनेछ। जुन काम रुस, चीन, उत्तर कोरियाले गर्न सकेन त्यो काम अब हामी गर्छौैँ।
त्यसको एउटै सुत्र ‘म’को सट्टा ‘हामी’ सोच्नुपर्छ। एउटा कथा छ :–
महाभारतमा लडाई भयो। एकापट्टी दुर्योधन, अर्कोपट्टी युधिष्ठीर। एकापट्टी कौरव, अर्कापट्टी पाण्डव लडे। त्यतिवेला पाण्डवहरु गुप्तवास र वनावासपछि ससुरा राजा द्रुपदको सरण परेर उसैको सेना पैँचो मागेर लडे। पाण्डवको सेनाको सेनापति नै द्रुपदको छोरा धृष्टद्युम अर्थात, द्रौपतिका दाजु थिए। जित्ने बेलामा धृष्टीद्युमले जिते।
अन्तिम दिनमा दुर्योधनलाई अचाक्ली भएछ। मरिसकेका थिएनन्, राजा छँदै थिए, राज्य उसैसँग थियो। उनले ज्योतिषलाई बोलाएर भनेछन्,
‘साइत तैँले हेरेको होइनस् ?, तैँले भनेको बेलामा शंक फुकेको होइन ? भिष्मलाई बनाएको होइन सेनापति ? म कसरी हारेँ भन्।’ चारैतिर खुडा र तरावार राखेर सोधे।
अरु ज्योतिषले त ‘खोइ हजुर, के मिलेन के मिलेन’ भनेछन्।
एउटा जान्ने ज्योतिषले चाहीँ ‘होइन हजुर हामीले हजुरको ग्रह, नक्षत्र, हेरेकै हुँ’ भनेछ ‘हजुर ग्रह नक्षत्र त भिम र युधिष्ठीर भन्दा कति राम्रो राम्रो। हजुरले जित्नुपर्ने।’
‘त किन हारेँ ?’
‘अरु सबै कुरा गणना गरियो, तर कृष्णको गणना गर्न बिर्सिएछ’ त्यो जान्ने ज्योतिषले भनेछ ‘त्यो बाहिरिया मान्छे, त्योसँग लड्ने भनेर कल्पना नै गरेनौँ, अरु सबैलाई त जित्नु नै भएको थियो।’
‘के भन्न खोजेको ?’ दुर्योधनले कड्कीए।
गुरुले भनेछन् ‘प्रश्न कृष्णको होइन। एउटै व्यक्तिले पनि मलाई यो राज्य चाहिन्न भनेर नछोडेका कारण हो। एउटै व्यक्तिले चाह्यो भने पनि ग्रह नक्षत्रको दिशा बदलिन्छ।’
यहाँ त्यस्तै हो, कसैले भन्दैन पार्टी सभापति मलाई चाहिँदैन, धन आउने मन्त्रालय मलाई चाहिँदैन भनेर। सत्य के हो भने, एउटा स्वार्थ त्याग्ने व्यक्तिले ग्रह नक्षत्रको दिशा बदलिदिन्छ। त्यो लडाईमा कृष्ण कसका छोरा थिए र को व्यक्ति थिए ? त्यो ठूला कुरा होइन। बस, कुरा के हो भने, त्यो युद्धमा भाग लिनेमध्ये कृष्ण त्यस्ता व्यक्ति थिए, जसलाई केही पनि चाहिएको थिएन।
निजी स्वार्थ त्यागेर, आफ्नै खुट्टामा उभिएर लाग्ने हो भने इतिहाँसको धारा बदलिन्छ।